HG वेल्स। महान अंग्रेजी विज्ञान कथा लेखक सम्झना गर्दै वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | विज्ञान कल्पना, लेखकहरू, काल्पनिक, नोभेला
जर्ज चार्ल्स बेरेसफोर्ड द्वारा HG वेल्स फोटो।
हर्बर्ट जर्ज वेल्स उनको अगस्ट १,, १ 13 on1946 मा लन्डनमा मृत्यु भयो। मसंग थियो 79 वर्ष र उनी एक इतिहासकार, दार्शनिक, र सम्भवतः सबैभन्दा प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक थिए विज्ञान काल्पनिक उपन्यास, विधा को अग्रदूत। हामीले उसको केही कार्यहरू पढेका छौं र यदि होईन भने, त्यो असंख्यमा हामीले देख्यौं फिल्म अनुकूलन जुन धेरै बर्षमा बनेको छ।
आज मलाई केहि संग शैली को यो क्लासिक सम्झना छ उनका of उपन्यासहरूका वाक्यांशहरू सब भन्दा राम्रो ज्ञात: समय मेशीन, संसारको युद्ध, डॉक्टर मोरउ को द्वीप y अदृश्य मानिस। म ती फिल्म अनुकूलनहरू पनि समीक्षा गर्दछु।
1.1 समय मेशीन
1.2 विश्वको युद्ध
1.3 चिकित्सक मोरउ को द्वीप
1.4 अदृश्य मानिस
2 कुन राख्नु पर्छ?
मा जन्म ब्रोम्लीकेन्ट काउन्टीमा, उहाँ तल्लो-मध्यम-वर्ग परिवारको तेस्रो बच्चा हुनुहुन्थ्यो जसले उनीहरूको राम्रो शिक्षा छ भनेर हेरचाह गर्थे।
जब एक दुर्घटना उनले उसलाई केही बेर ओछ्यानमा बस्न बाध्य तुल्याए, उनले धेरै पढ्ने अवसर लिए, जुन उनलाई लेख्न चाहन्थे। त्यसो भए उनले क्षयरोगका उनले आफैंलाई पूर्ण रूपले लेखनको लागि समर्पण गरे। ऊ एकदम प्रशस्त थियो र उसका सबै कामहरू उसको गहनबाट प्रभावित छ राजनीतिक मान्यता.
उनले त्यो वकालत गरे विज्ञान र शिक्षा तिनीहरू भविष्यको समाजको दुई आधारभूत स्तम्भहरू हुनेछन् जसमा मानवले ट्रान्सन्डेन्टल लीप लिनेछ।
En 1895 प्रकाशित समय मेशीन, पहिले श्रृंखलाको रूपमा र पछि पुस्तक र यसको रूपमा सफल यो तुरुन्त थियो। त्यहाँबाट उनले तिनीहरूलाई बाँधे। उही वर्ष उसले पनि प्रकाशित गर्‍यो अचम्मको भ्रमण, र निम्न तीन बर्षमा तीन उपन्यासहरू जसले उनको प्रतिष्ठा बढायो: चिकित्सक मोरउ को द्वीप, अदृश्य मानिस y विश्वको युद्ध.
हामीले बिर्सेको एक प्राकृतिक कानून बौद्धिक बहुमुखी प्रतिभा परिवर्तन, खतरा र बेचैनीको लागि क्षतिपूर्ति हो ... प्रकृति बुद्धिको लागि कहिले पनि अपील गर्दैन जबसम्म बानी र वृत्ति बेकार हुँदैन। त्यहाँ कुनै ईन्टेलीजन्स छैन जहाँ परिवर्तन छैन र परिवर्तनको आवश्यक छैन। केवल बुद्धिमत्ता भएका जनावरहरूले विभिन्न किसिमको आवश्यकता र खतराहरूको सामना गर्नुपर्दछ।
शक्ति आवश्यकताको परिणाम हो; सुरक्षा कमजोरी को लागी एक पुरस्कार स्थापना गर्दछ।
सायद साहसको मेशिन सञ्चालन गर्न सिक्दै, तत्कालको जीवनको सीमाहरूको लागि तत्काल यात्रा गर्न, समय-समयमा भविष्य वा अतीत बिना संक्षिप्त र डरको डबल ब्ल्याकमेल बिना संक्षिप्त स्वर्ग।
तपाईं कुनै पनि हिसाबले समय मा सार्न सक्नुहुन्न, तपाईं वर्तमान क्षण बाट भाग्न सक्नुहुन्न।
सम्भवतः यस कथाको सबैभन्दा प्रख्यात फिल्म रूपान्तरण (र मनपर्ने) एक हो जुन स्टार गरिएको छ रॉड टेलर en 1960 र यो उत्कृष्ट विशेष प्रभावहरु को लागी ऑस्कर जित्यो। अन्तिम एक २००२ को हो र गाय पियर्स र जेरेमी आइरनले अभिनय गर्‍यो।
दिनको दौरानमा हामी हाम्रो नराम्रो मामिलाहरूमा यति व्यस्त हुन्छौं कि त्यहाँका कसैले हाम्रो पाइलाहरू र मेहनती र विधिवत पृथ्वी ग्रहको योजनालाई अवलोकन गर्न असम्भव देखिन्छ। केवल रात सक्षम छ, यसको अन्धकार र मौनताले, परिस्थितिहरू सिर्जना गर्न ताकि मार्तिशियनहरू, सेलेनाइटहरू र ब्रह्माण्डमा बस्ने अन्य जीवजन्तुहरू हाम्रो कल्पनामा स्थान पाउँदछन्।
धर्मले विपत्तिहरूको सामना गर्न छोडे पनि के फाइदा हुन्छ र?
त्यसबेलासम्म मैले बुझिन कि म त्यहाँ असहाय र एक्लो छु। एकाएक मलाई झर्ने झैं डरले मलाई समात्यो।
यो सम्भव छ कि मार्टियनहरूको आक्रमण अन्तिममा पनि हाम्रो लागि लाभदायक हुनेछ; कमसेकम यसले हामीलाई भविष्यमा त्यस्तो शान्तिमय आत्मविश्वास लुटेको छ, जुन क्षयको निश्चित स्रोत हो।
के प्रसिद्ध को बारे मा भन्न रेडियो प्रसारण के गर्नुभयो ओर्सन वेल्स यस उपन्यासको अक्टुबर 30०, 1938? यो एक थियो नाटकीय अनुकूलन, एक घण्टा, मा गणना गरिएको न्यूजकास्ट फारम अन्तिम समय। यो यति दर्शकहरु प्रवेश कि सबैले साँचो विश्वास गरे त्यो विदेशी आक्रमण। यो रेडियो क्षणको रूपमा ऐतिहासिक रहेको छ जस्तो कि यो अपरिवर्तनीय छ। र फिल्म अनुकूलनहरू यसलाई पार गर्न सक्षम छैनन्।
सब भन्दा क्लासिक, जसले दृश्य प्रभावहरूको लागि ऑस्कर जित्यो, १ 1953 XNUMX बाट थियो। र सबैभन्दा हालको टम क्रूज अभिनीत एक थियो। 2005 मा.
चिकित्सक मोरउ को द्वीप
एउटा जनावर एकदमै क्रूर र धूर्त हुन सक्छ, तर झूट बोल्न वास्तविक मानिस चाहिन्छ।
मैले कहिल्यै बेकारको चीजको बारेमा कहिल्यै सुनेको छैन कि ढिलो होस् वा चाँडो, विकास अस्तित्वबाट प्रतिबन्धित छैन। र तपाईं? र पीडा आवश्यक छैन।
जनावरहरू धेरै धूर्त र क्रूर हुन सक्छन्, तर केवल एक मानिस झूट बोल्न सक्षम छ।
यी प्राणीहरू वास्तवमा क्रूर राक्षसहरू, मानव प्रजातिहरूको केवल विडंबनापूर्ण प्यारोडीहरू बाहेक अरू केहि थिएनन् भन्ने तथ्यले मलाई उनीहरूको क्षमताको बारेमा अस्पष्ट बनाउँथ्यो, जुन कुनै निश्चित आतंकभन्दा कता हो कता खराब थियो।
उनीहरूको तारांकित s० को दशकको क्लासिक संग म बाँकी छु बर्ट ल्यान्कास्टर र माइकल योर्क १ 1977 20 मा। तर त्यहाँ एक पनि छ जुन लगभग २० वर्ष पछि बनेको थियो मार्लन ब्रान्डो र भेल किल्मर.
ठूला र अनौंठो विचारहरू जुन अनुभवलाई पछाडि राख्छन् प्राय जसो पुरुष र महिलाहरूमा साना, बढी मूर्तिधारणीय विचारहरू भन्दा कम प्रभाव पर्दछ।
सबै पुरुषहरू, उच्चशिक्षित पनि उनीहरूसँग केही अन्धविश्वासी हुन्छन्।
म एक्लै, यो अविश्वसनीय छ कि एक सानो मान्छेले मात्र गर्न सक्छ! थोरै चोरी गर्नुहोस्, केही क्षति गर्नुहोस्, र यहीं अन्त हुन्छ।
म एकदम शक्तिशाली मान्छे हो र मेरो हात ठूलो छ; साथै, म अदृश्य छु। कुनै श doubt्का छैन कि उसले ती दुबैलाई मार्न सक्छ र यदि उसले चाहेको खण्डमा सहजै उम्कन सक्छ तिनीहरू सहमत छन्?
र यो को म पनि महान लिन्छु क्लाउड वर्षा जुन अनुहार र शरीरको क्लासिकमा नायकलाई दृश्यमान बनाउँदछ 1933। तर त्यहाँ पनि शीर्षक छ मा श्रद्धांजलि र भिन्नताहरू छन् छाया बिना मानिससंग केविन बेकन वर्षमा 2000। र विशेष गरी, सत्तरीको श्रृंखला मलाई मेरो बाल्यकालदेखि नै मलाई कत्ति माया लागेको छ भन्नेमा मँ ठूलो स्नेह राख्छु बेन मर्फी, यसको नायक।
कुन राख्नु पर्छ?
हार्ड choise। त्यसोभए सबै भन्दा राम्रो कुरा भनेको वेल्सको कुनै पनि कथाहरू पढ्नु (वा हेर्नु) हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » विज्ञान कल्पना » HG वेल्स। महान अंग्रेजी विज्ञान कथा लेखक सम्झँदै